टीकापुर पार्कमा पर्यटकको घुइँचो, एकै दिनमा ३ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन ! – Life Nepali
टीकापुर । गुलावको बगैँचाका नामले चिनिने टीकापुर पार्क (वृहत उद्यान) नयाँ वर्षको पहिलो दिन भरिभराउ थियो । पार्कमा पिकनिक खान र घुम्न आउनेको भीड लागेको थियो । टीकापुर पार्कमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार रु तीन लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण शून्य अवस्थामा रहेको पार्कमा यस वर्ष पहिलो दिन नै रु तीन लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको हो । विसं २०७६ को पहिलो दिन भने रु दुई लाख ९३ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
विसं २०७७ मा कोरोना महामारीका कराण पार्क बन्द थियो । पहिलो दिन १२ हजार ५०० नागरिकले पार्क अवलोकन गरेका पार्क इञ्चार्ज अर्जुन कुँवरले जानकारी दिए । नयाँ वर्ष– २०७८ को अवसरमा टीकापुर पार्क बिहान ६ बजेबाट प्रवेश खुला गरिएको थियो । पछिल्लो समय कैलालीवासीको पिकनिक खाने र छिमेकी जिल्लाका नागरिकको पर्यटकीय ठाउँका रुपमा स्थापित टीकापुर पार्क पर्यटकको रोजाइँ बन्न थालेको छ ।
पार्क छेउमै रहेको कर्णाली नदीको कलकल बग्ने पानी, नदीको छालमा गरिने जलयात्रा (¥याफ्टिङ) को आनन्द लिन र पार्कमा फुलेका झण्डै ४२ प्रजातिका रङ्गीविरङ्गी गुलाफका फूलले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाले नयाँ वर्षको अवसरमा पार्कमा आउने पर्यटकको व्यवस्थापनका लागि थप कर्मचारी र स्थानीयवासीलाई परिचालन गरेको छ । १३ जना कर्मचारी कार्यरत टीकापुर पार्कमा नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटक बढ्ने भएकाले पाँच नगर प्रहरी र पाँच स्थानीयवासीलाई परिचालन गरिएको उनले बताए ।
Previous टीकापुर पार्कमा पर्यटकको घुइँचो, एकै दिनमा ३ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन !
Next लगातार बढिरहेको सुनको मुल्य आज सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो !